Top-up Card 1000 kyats
Top-up Card 3000 kyats
Top-up Card 5000 kyats
Top-up Card 10000 kyats
Joint us @ FaceBook
How to Rate & Follow?
1 Share 597 Views
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ထိုင်းရဲ့ မင်းသားချော
ကဲ ဒီတစ်ခေါက်တော့ Sean ပရိတ်သတ်တွေအလှည့်
ဇာတ်ကားအညွှန်း Oh My Ghostess ( Korea )
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့
ရုပ်ရှင်အညွှန်း : Color of Night ( Chinese )
ငွေပေါပေမယ့် ခြိုးခြံနေထိုင်တတ်တဲ့ နာမည်ကျော်6ယောက်
အရမ်းချမ်းသာတဲ့ ဆယ်လီတွေဟာ ဇိမ်ကျလွန်းလှတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့
ဇာတ်လမ်းအညွှန်း Go Princess Go
ဇာတ်လမ်းအညွှန်း : On the Wings of Love ( Philippines )
ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကားတွေကလည်း အာရှမှာအောင်မြင်မှုရရှိလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း
ဇာတ်လမ်းအညွှန်း : At Cafe6( Taiwan )
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသောအခါ ( ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ )
ဒီတစ်ခေါက် Movie Review လေးကတော့
အရိုတစ်လိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲလေး Bromance
ကြည့်ပြီးကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးတွေအကြောင်း ပြန်ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်
ပရိတ်သတ်အချစ်တော် Mario Muarer အကြောင်း
ထိုင်းမင်းသားလေး Mike D'Angelo အကြောင်း
ထိုင်းမင်းသားလေး Mike D'Angelo ဆိုရင်
ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ Idol9ဦး
Kpop Idol တွေရဲ့ ဘဝက အားကျဖို့ကောင်းပေမယ့်
Kai ( Exo ) နဲ့ လီမင်ဟိုတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့ ဒီမင်းသားရုပ်မျိုးထွက်တယ်တဲ့ !
ကိုရီးယားရဲ့ မင်းသားချော နှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့
ဒီလို အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်ကြည့်ပါ !
အများကြီးနဲ့ မြန်မြန်မချစ်ပါနဲ့ နည်းနည်းနဲ့
ထူးဆန်းတဲ့ ဒီအမှုက ဖိလစ်ပိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ
သင်္ကြန်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဆံပင်အရောင်တွေ
အံသြလောက်စရာကောင်းအောင် IQ မြင့်တဲ့ အနုပညာရှင်များ
Exo အဖွဲ့ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ
Kpop လှိုင်းလုံးကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို
ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတဲ့ Park Shin Hye နဲ့ Choi Tae Joon
Bella Ranee ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ဇာတ်ကား ၅ ကား
ထိုင်းမင်းသမီးလေး Bella ဆိုရင်တော့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ
Exo အဖွဲ့ဝင် Lay ကိုလူချစ်လူခင်များရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ
Exo အဖွဲ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းကျန်ရှိတဲ့
Heart ထိစရာ Taeyang ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအပေါ်နွေးထွေးမှု
လူမျိုးမတူပေမယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
နေထိုင်ရာနိုင်ငံချင်းမတူ ၊ လူမျိုးချင်မတူဘဲ
အသားအရည်ပြသာနာတွေကို ကျော်လွန်စေတဲ့ BEY🌙ND ...
IU ကို ကဗျာဆန်ဆန်လေး Surprise လုပ်လိုက်တဲ့ Lee Seung Gi
အခုတလောမှာ Hwayugi ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့
OMG လို့တောင်ဆိုရမလိုပါပဲ ။ အမေရိကန်သမ္မတ
Idol ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်မိရာကနေ ကိုယ်တိုင် Idol ဖြစ်လာတဲ့ မိန်းမလှလေး
ကိုယ့် Idol ကိုယ် သည်းသည်းလှုပ်ချစ်တတ်ကြတာတော့
Kpop Idol တစ်ယောက်အဖြစ်ပွဲဦးထွက်မယ့် ဂျပန်အပြာမယ်
Kpop လောကထဲ Group အသစ်တွေပွဲဦးထွက်တယ်ဆိုတာ
မသပ်မရပ် စုတ်ဖွားဖွား လိမ်လိမ်ကောက်ကောက်
Mobile Game အဖြစ်ထွက်တော့မယ့် ‘BTS World’
ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမောတဲ့ BTS အဖွဲ့ကတော့
စကားပြန်မပါဘဲ တရုတ်လို အင်တာဗျူးဖြေခဲ့တဲ့ Big Bang's SEUNGRI
SEUNGRI ရဲ့ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကတော့
Chae Soo Bin နဲ့ ပြင်းပြတဲ့အနမ်း အကြောင်း ပြန်ပြောပြတဲ့ မင်းသား Yoo Seung Ho
မကြာသေးခင်ကမှ ကိုရီးယားမှာ ထုတ်လွှင့်ပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့
Share 4k Views
Taeyang နဲ့ Min Hyo Rin တို့ရဲ့ Pre-wedding ဓါတ်ပုံတွေ
Kpop လောကရဲ့ အထင်ရှားဆုံး Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Online ပေါ်မှာ Tarot အခမဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့ Website များ
ရှေ့ ဖြစ်မယ့် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကိုကြိုသိချင်တဲ့သူတွေ
Share 286 Views
Idol ထိ ဓါးကြည့် အဖြစ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်
Korea Idol တွေရဲ့ စန်းကတော့ တကယ့်ကိုအံ့မခန်းစရာပါ
2 Share 457 Views
2018 မှာ အသစ်ကြည့်ရမယ့် ကိုရီးယား Drama တွေ
ကိုရီးယားဇာတ်ကား Crazy တွေအတွက် ခုနှစ်သစ်
သက်ရှိ စင်ဒရဲလားမင်းသမီးလေး ( သို့ ) ဘူတန်ဘုရင်မ
သူမကတော့ ကမ္ဘာမှာ အသက်အငယ်ဆုံး
Anime နဲ့ တထေရာထဲတူတဲ့ Idol တွေ
Crush နေတာလား ? ချစ်နေတာလား ?
" ကြွေတယ်ကွာ " " ခွက်ပါရစေ "
လီကွမ်ဆူရဲ့ တကယ့်စိတ်ရင်းကိုသိသာစေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေ
Running က သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့ သစ်ကုလားအုတ်ကလေးဟာ
ကား accident ကြောင့် ဆေးရုံရောက်နေကြတဲ့ B1A4 အဖွဲ့သားများ
B1A4 အဖွဲ့ဟာ ကား မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး
Hearty heart Play Pencil Review
ခုတလောမှာမှ Hearty Heart ကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိထားတဲ့
1 Share 651 Views
Aavashare မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Blog တွေကို
လက်ဆောင်တွေယူဖို့ Share တတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့
ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ... ( Part - II )
8 Lee Min Ho Lee Min Ho ဆိုလို့ ဟို
ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ...
Idol တို့ရဲ့ Snap မိသွားတဲ့ ချစ်စရာပုံလေးများ
Kpop Fan တွေ ရှိကြလားဗျိုး ။ ဒီတစ်ခါတော့
Phone Bill အတွက်
Facebook နဲ့ log in ဝင်ပါ Refral နေမှာ Jyc21 ထည့်ပါ
Linn Maung Oo
10 Share 310 Views
5 Share 150 Views
Aung Ye Yint
21 Share 692 Views
Aavashare website လေးထဲမှာ မိတ်ဆွေအသစ်တွေလဲရမယ်
ပရိတ်သတ်တွေတော့ ရင်ကွဲမယ့် သတင်းပါပဲ
ကျော်ကျော်ပိုင်မှုး မျှဝေပေးတဲ့ ၀ိတ်ချနည်း
6 Share 412 Views
မင်းသား Hyun Bin နဲ့ မင်းသမီး Kang Sora တို့လမ်းခွဲရတဲ့ အကြောင်းရင်း
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့
7 Share 1.2k Views
အဲဒီကော်ဖီဆိုင်ကို C-Cup ကော်ဖီဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်
သေဆုံးပြီးနှစ်ပါတ်ကြာမှ အလောင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး
6 Share 890 Views
အလုပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကြုံခဲ့တဲ့ Kpop Idol များ
4 Share 1k Views
လက်ထပ်ပြီးကာမှ ပိုလှလာတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေ
အပျိုနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘယ်သူပိုလှမလဲလို့
5 Share 658 Views
မြင့်မားတဲ့ဥာဏ်ရည်နဲ့ ပညာထူးချွန်တဲ့ ကိုရီးယား Idol တွေ
7 Share 535 Views
တရုတ် Yoona နဲ့ တရုတ် Suzy
Kpop ကိုသည်းသည်းလှုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ တရုတ်ပရိတ်သတ်တွေကလဲ
ကိုရီးယားမော်ဒယ်ကို လက်ထပ်လိုက်တဲ့ Air Asia က CEO
ကိုရီးယားမလေးတွေရဲ့ အလှက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း
Share 2.4k Views
Kpop လောကထဲကချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သွေးနှောလေးတွေ
Kpop အနုပညာလောကဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့
Share 1.2k Views
ကိုရီးယားက အချောဆုံး Gamer
ကြွေတာမှ တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပါပဲ ။ Gamer
1 Share 830 Views
တော်ဝင်စင်တာ ကပေးလိုက်တဲ့ အတွေးတွေ
1 Share 433 Views
သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ ချီးကျူးခံရတဲ့ အဆိုတော်6ဦး
Onew SHINee leader Onew ဟာသူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်
Share 1.3k Views
ထိုင်းမင်းသားကြီး Shakrit ရဲ့ ၆ ထပ်ကွမ်း ကံမကောင်းခဲ့တဲ့အချစ်ရေး
1 Share 3.9k Views
ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာတဲ့ လုဟန်ရဲ့ ချစ်သူ
3 Share 14.5k Views
ဲJames Ma အကြောင်း
ကဲ ... ဒီတစ်ခါတော့ Admin အကြိုက်ဆုံးမင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ James
ပွဲဦးထွက်ချိန်ကပုံစံနဲ့ လုံးဝခြားနားသွားတဲ့ Idol ရှစ်ဦး
1 Share 679 Views
အမေရိက ဂီတလောကမှာ ရေပန်းစားလာတော့မယ့် K-Pop Idol3ယောက်
Time Magazine က အမေရိကန် ဂီတလောကထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့
အလှဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ၁၀ ဦး
Taeyang ကို အစပိုင်းတွေမှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့
Running Man Fan တွေဟာ Running Man ကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်
1 Share 362 Views
သတို့သမီးကို အနမ်းပေးနေတဲ့ မင်းသား ဆောင်ဂျွန်ကီ
1 Share 1.8k Views
2017 ခုနှစ်မှာကွဲကွာသွားရတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် စုံတွဲများ
1 Share 552 Views
Fan တစ်ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ Red Velvet Yeri
Red Velvet အဖွဲ့ဟာ SM Entertainment ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့
1 Share 407 Views
ကိုယ့် Fan နဲ့ ပြန်လက်ထပ်သွားတဲ့ တရုတ်အနုပညာရှင်များ
1 Share 3.1k Views
GiGi အိတ်ထဲက Cosmetic တွေ စုပေါင်းခြင်း ( သို့ ) Maybelline Gigi Hadid Jetsetter Palette
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အိတ်ထဲမှာ မပါမဖြစ်ရှိနေတတ်တာကတော့
2 Share 435 Views
မျက်​လုံး ကျန်းမာ​ရေး အတွက်​
မျကိလုံးကျန်မာရေး Health 20/02/2017 172 views ယနေ့
Chaw Kay Khine Chue
4 Share 431 Views
Aavashare မှာအခု blogတွေရေးနေကျတဲ့
ဈေးနှုန်းသက်သာသောLaptop cooling table
ကျတော်တို့ LLW Online Shopping မှာ Desktop &
100 % authentic ✨✨✨Skmei Brand✨✨✨ နာရီ
Wacom tablet တွေရောင်းပါတယ်။
Fullmoon party ​လေးအတွက်လိုအပ်​တယ​လေး​တွေ
သဘာဝ တွင်းထွက် စစ်စစ် ပယင်းလက်ကောက်
Big Tree brand ဖိနပ်လေးတွေပါ။size
အိမ်ရှင်မတွေအချိန်ကုန်သက်သာစေမယ့် Push cutter or speedy chopper
Push cutter or speedy chopper
3 Share 294 Views
၀ါသနာနဲ့ ငွေရှာနိုင်ဖို့ဆိုတာ ...
3 Share 380 Views
6 Share 486 Views
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Interior Designer ၁၀ယောက်
သင်ဟာ Interior Designer တစ်ယောက်လား? Interior
1 Share 816 Views
Project Management Workshop Day 2
AGOP မှကျင်းပြ ပုလုပ်တဲ့Project Management Work Shop Day1
ယနေ့workshop မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့
Entrepreneurship Project Management Workshop (Free)
A Group of People Co., Ltd. (AGOP)
သင့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ဘဝကိုစတင်ခြင်း Starting Your Working Life
Share 781 Views
RC Slab အမျိုး မျိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Construction တွေမှာ လုပ်နေတဲ့
Value Star Institute မှဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများ
VALUESTAR INSTITUTE မှ February လဆန်းတွင်
Share 629 Views
Promoting Youth Development Forum
Share 595 Views
ntroduction to Supply Chain Management (part 1)
ထိုင်းမင်းသားလေး Mike D'Angelo
Kpop Idol တွေရဲ့ ဘဝက
OMG လို့တောင်ဆိုရမလိုပါပဲ ။
ကိုယ့် Idol ကိုယ်
Kpop လောကထဲ Group
Kpop လောကရဲ့ အထင်ရှားဆုံး Boy Group
ကိုရီးယားဇာတ်ကား Crazy တွေအတွက်
Running က သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့
B1A4 အဖွဲ့ဟာ ကား
8 Lee Min Ho
Kpop Fan တွေ ရှိကြလားဗျိုး ။
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ
ကဲ ... ဒီတစ်ခါတော့ Admin
Time Magazine က အမေရိကန်
Taeyang ကို အစပိုင်းတွေမှာ
Running Man Fan တွေဟာ Running Man ကို
Red Velvet အဖွဲ့ဟာ SM Entertainment ရဲ့
6 Share 1.1k Views
Breaking News ! ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မော်ဒယ် Lee Ui Soo
SM Entertainment ရဲ့ လက်ခွဲဖြစ်တဲ့ ESteem
7 Share 9.4k Views
ကိုရီးယားမလေး နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် ထိုင်းမင်းသား Auan Rangsit
5 Share 5.5k Views
ကလေးဘ၀ထဲက သရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Male Idol ၅ ယောက်
4 Share 867 Views
ကမ္ဘာကျော်မဖြစ်ခင်က သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်ကြလဲ ?
5 Share 352 Views
ကလေးမွေးပြီးမှ ပိုလှလာတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးများ
3 Share 609 Views
အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံဖူးတဲ့ ကိုရီးယား Idol များ
3 Share 1k Views
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ရပ်တည်ကြောင်းပြခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
3 Share 366 Views
Weekend မှာကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံး အာရှဇာတ်လမ်းတွဲများ
1 Share 1.6k Views
အင်ဒိုနီးရှားဖန်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို လှုပ်ခါသွားတဲ့ Park Bo Gum
မင်းသား Park Bo Gum ကတော့ Anti Fan
1 Share 998 Views
မင်းသားတွေ အများကြီးကြားက Nam Joohyuk ကိုရွေးလိုက်တဲ့ Dara
Hyoni TV ကနေစီစဉ်တဲ့ this and that ဆိုတဲ့ Game
Share 2.2k Views
ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး Margie ရဲ့ အကြောင်း
Margie လို့ပရိတ်သတ်တွေ သိကြတဲ့
1 Share 3.4k Views
4 Share 1.4k Views
သင်မသိသေးတဲ့ Sandara Park ရဲ့ Personal အကြောင်းများ
Disband လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ 2NE1
4 Share 4.8k Views
မောင်နှမတွေလို့ ပြောရင် ယုံနိုင်လောက်မယ့် ကိုရီးယား Idol များ
6 Share 1.2k Views
ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် နာမည်ကြီးလာတဲ့ Song Jihyo ရဲ့ မောင်လေး
Running Man အစီအစဉ်ရဲ့
4 Share 1.1k Views
သူ့ Fan တွေအတွက် လုံခြုံရေးနဲ့ အမြဲအတိုက်အခံလုပ်တဲ့ KAI
အက အတော်ဆုံး EXO
6 Share 5.6k Views
Happy Virus လေး ကိုChanyeol အကြောင်း
1 Share 2.2k Views
1 Share 1.4k Views
EXO က Lay ရဲ့ အကြောင်း
1 Share 2.1k Views
EXO အဖွဲ့က အသံပါရမီရှင်လေး Baekhyun ဆိုတာ ...
ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ Krystal ကိုအားပေးဖို့ ရှုတင်ကို ကော်ဖီလှည်းပို့လိုက်တဲ့ Park Shin Hye
Share 32.2k Views
1 Share 1k Views
သွေးမတော်သားမစပ် တူလွန်းတဲ့ Cele တွေ
1 Share 1.1k Views
ပလက်စတစ်ဆာဂျရီကြောင့် ပိုရုပ်ဆိုးသွားတဲ့ Cele များ
ခန္တာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကြောင့်ကျော်ကြားလာတဲ့ Cele များ
Cele ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ
1 Share 558 Views
အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မယ်ဆိုတာ သင်မယုံနိုင်မယ့် Idol များ
Share 2k Views
Face of The Group KAI အကြောင်း
ရေသူမ မင်းသမီးလေး ဒုတိယကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပြီ
EXO ရဲ့ Lead Vocalist နဲ့ Lead Dancer Xiumin ဆိုတာ ...
2 Share 246 Views
ရေးကရော့ - အကြံကောင်းတချက်ကြောင့် မီလျံနာဖြစ်သွားတဲ့ McDonald’s ဆိုင်ပိုင်ရှင်။
သူဟာ Multimixer သစ်သီးဖျော်စက်
Black Box ဆိုတာ
စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေတဲ့ TOP အကြောင်း မျက်ရည်တွေကြားကပြောခဲ့တဲ့ သူ့အမေ
[★BREAKING] T.O.P’s Mother Tearfully Declares He Is Close To Dying 😓
နဲနဲလေးနောက်ကျမိလို့ bossဆူတဲ့အခါ အလုပ်ကထွက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း...
Aavashare.comမှ Samsung Galaxy Tab A6 ကံထူးရှင်အား ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ!
Aavashare မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy Tab A6
၃.၄.၂၀၁၇မှစတင်၍ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် YBS ယာဉ်ဈေးနှုန်းထားများ
( ၁ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်
Tab A6 ကံစမ်းကာလအားပြောင်းရွေ့ကြောင်းကြေညာခြင်း
WinaTablet with aavashare.com!
Apple user တွေအတွက်သတင်းကောင်းပါ။
​လေယာဉ်​စီးချိန်​ဘာ​ကြောင့်​ Airplane Modeလုပ်​သင့်​သလဲ?Airplane Modeဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ?
မိမိကိုယ်​ချစ်​​ရေးဆိုလာသူကိုယုံကြည်​သင့်​ မသင့်​ ​ဗေဒင်​​လေးတွက်​ပြီးစမ်းကြည့်​မယ်​
LG အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာ့ဂေဟပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီသော LG Mosquito Away တီဗွီ နှင့် အဲယားကွန်း
ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာနိုင်တဲ့ Scream Go Game
Father Land ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့်ကို အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်ချမှတ်
ပီရူးနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာ့အထင်ကရ Machu Picchu
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဟစ်တလာသုံးခဲ့တဲ့ တယ်လီဖုန်းကို လေလံတင်ရောင်းချမည်
အသစ်လေ့လာတွေ့ရှိသော Vitamin Dရဲ့ကောင်းကျိုးများနဲ့ ဘယ်အစားအစာတွေကနေရရှိနိုင်သလဲ?
*** သင့်ကလေး အ၀လွန်နေပြီလား ***
ရတနာပုံအသင်းကို ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အများပိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲမည်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွေ အလှူငွေကျပ်ဆယ်သိန်းတိတိလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ အင်ဖန်တီနို
ကျိုက်ထီးရိုး ရင်ပြင်တော်မှာ အလှူခံတဲ့ ရဟန်းနဲ့ သီလရှင်တွေကို လူဝတ်လဲအရေးယူ
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်ရဲ့အစ်ကိုကင်မ်ဂျုံနမ် မလေးရှားလေဆိပ်တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရ
ရဲတပ်ကြပ်ကို သေအောင်ကားနဲ့ တိုက်သတ်ခဲ့သူကို လူသတ်မှုနဲ့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်
တိုက်ပေါ်မှာ့စွန့်ပစ်ခံရသည့် ကလေးငယ်နာရီပိုင်းအကြာတွင် သေဆုံးခဲ့
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်
1 Share 420 Views
ကဲ ရှေ့ တစ်ပိုင်းမှာ စာရေးသူ
2017အတွက်နေထိုင်စရိတ်အများဆုံး ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများ
ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှ စိတ်ကြည်နူးစရာ Bay of Bangal Resort
"Bay Of Bangal Resort
🙏🏻 မင်္ဂလာပါ 🙏🏻
🌺 ကလီယိုပါထရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း 🌺
Share 217 Views
Gong Xi Fa Chai to you and your family! Enjoy your family reunion dinner and may
4 Share 332 Views
2 Share 133 Views
အွန်လိုင်းသုံးရင်း ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေ Free ရမယ်ဆိုရင် !!!
10 Share 1k Views
Valentine's day အထူးအစီအစဉ်များ
Myanmar Celebrities choice online store
Myanmar Celebrities Choice Online Store မှ
HP products Valentine Day promotion at Hledan Center
Park Royal Hotel ရန်ကုန် Si Chuan Dou Huaတရုတ်စားသောက်ဆိုင် စားဖိုမှုးသစ်နှင့်ဟင်းလျာများမိတ်ဆက်ပွဲ
Cosmetics special discount festival 2017
Casio Gshock & Edific promotion
#Trip to Japan # Join with Sai Sai Kham Leng
1 Share 424 Views
My Yangon Best Kept Secret 💫လှည်းတန်းက ကျိူင်းတုံအစားစာတွေသီးသန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်အကြောင်းလေးပြောပြမယ်💫
1 Share 161 Views
ကင်ဆာ အားပေး အစားအစာများ
မေး ။ ။ ဒီနေ့တော့
1 Share 353 Views
ံကိုယ့်အတွေး နဲ့ကိုယ် ဘဝအမောတွေပြေပါစေ။
2 Share 447 Views
ွှအီတလီအစားအစာကြိုက်သူတွေအတွက် သုံးဆိုင်မြောက်ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Cafe' Caesar
ပြင်ဆင်ရတာလွယ်ကူပြီး အရသာရှိတဲ့ အမေရိကန်စတိုင် Club sandwich
*** ရွှေချဉ်ပေါင်၏ ကျန်းမာရေး
မရမ်းသီးကို လူတို့ ဘယ်ခေတ်
ခုတလောမှာမှ Hearty Heart
Beauty Secret4You
3 Share 128 Views
အမေ့ဆီက မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းလေ့လာခဲ့တဲ့ Make Up Blogger Sweety
3 Share 993 Views
ကိုယ့်ဝတ်စုံနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖိနပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ ?
10 Share 618 Views
Idol တို့ရဲ့ ပြောစမှတ်တွင်တဲ့ ကောဇောနီပေါ်က ကိုးရို့ကားရားဝတ်စုံများ
Met Gala 2017 ပွဲရဲ့ အထူးခြားဆုံးဖက်ရှင်များ
Hollywood ရဲ့ Red Carpet Fashion တွေဟာဆိုရင်
ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသုံးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုရင်ခုန်သွားစေတဲ့ Bella
Share 1.4k Views
ရေချိုးတိုင်းသင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားအယွင်း ( ၅ )ခု
မျက်နှာ V-Shaped ဖြစ်အောင်ပြုပြင်နိုင်သော Vibration Beauty Bar
ဒါလေကတော့ Vibration Beauty Bar ဖြစ်ပါတယ်...
တစ်ခေတ် ပြန်လည်ခေတ်ထလာတော့မယ့် ဂျင်းစတိုင်လ်
တစ်လအတွင်း ဆံပင် ၁၀ စင်တီမီတာ ဘယ်လိုရှည်အောင်လုပ်မလဲ..
တစ်လအတွင်း ဆံပင် ၁၀
မိတ်ကပ်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စွန့်သင့်လဲ.....
Bohemian Fashion အားလေ့လာခြင်း
ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် အလှပြင်မယ်
Ease body lotion&Dewy body lotion
Beauty Blender လေးတွေအကြောင်းတစေ့တစောင်း
ယခုနှစ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှ Miss Myanmar ရဲ့ National Costume
MISS UNIVERSE MYANMAR'S NATIONAL COSTUME <3 <3 <3
ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမောတဲ့ BTS
Facebook နဲ့ log in ဝင်ပါ Refral နေမှာ Jyc21
Facebook ပေါ်မှာ တွေ့သမျှပုံတွေကို အတု အစစ် ခွဲခြားနည်း
1 Share 448 Views
candy crushထပ်ပိုပြီး စွဲလန်းစေမှာသေချာတဲ့Gardenscapes
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8plus မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပုံရိပ်များ
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8+ မိတ်ဆက်ပွဲအား
Aavashare ရဲ့ Lucky draw အစီအစဉ်မှ Grand Prize Samsung tab A6 specification
Aavashare ရဲ့ Lucky draw အစီအစဉ်မှ Grand Prize Samsung
Xiaomi မှအသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်တော့မယ့် MiMix2အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Xiaomi CEO နဲ့ Founder Lei Jun က ပြီးခဲ့တဲ့
Samsung မှ MWC 2017 Barcelona ပွဲမှာပြသခဲ့သော Galaxy tablet S3 and Galaxy Books
Samsung မှ MWC 2017 Barcelona ပွဲမှာပြသခဲ့သော
youtube videos များအား offline ပြုလုပ်၍ phone အတွင်းသိမ်းဆည်းနည်း
youtube videos များအား offline ပြုလုပ်၍ phone
xiao mi phone များတွင် mobile data ကန့်သတ်ခြင်း
xiao mi phone များတွင် mobile data
Windows 10 အသုံးပြုသူများအတွက် free virus killer
Windows 10 အသုံးပြုသူများအတွက် free virus
သင်အသုံးမပြု သော software application များအား uninstall ပြုလုပ်ခြင်း
သင်အသုံးမပြု သော software application
PC တွင် download upload speed test ပြုလုပ်ခြင်း
PC တွင် download upload speed test
Mobile Phone ဖြင့် speed test စမ်းခြင်း
ဖျောက်ထားသော files နှင့် folders များကို မြင်ရအောင်လုပ်နည်း
မမြင်ရအောင် လုပ်ထားသော files
webpageများကို ဖုန်း home screen ပေါ်တွင် shutcut ပြုလုပ်ခြင်း
webpageများကို ဖုန်း home screen ပေါ်တွင်
Chrome Browser တွင် မြန်မာဇော်ဂျီဖောင့် ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
ယနေ့ ခေတ်စားနေသော မိုဘိုင်းဂိမ်မာများ အကြိုက် Mobile Legends Game
Mobile Data အသုံးပြု မှုလျောချခြင်းနည်းလမ်းများ
Mobile Data အသုံးပြု
Selfie အရူးအမူးတွေအတွက် OPPO F1 PLUS
Selfie ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ကူးရာမှာ အသုံးတည့်မယ့် VIVO V5 PLUS
သင့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားသွားစေမယ့် iPhone 8 ရဲ့ features များ
iPhone ကို မကြိုက်ပါဘူး
ဖုန်းလာတဲ့အခါ ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်ခဲ့ရင် မက်ဆေ့ Auto ပို့ ပေးသွားမည့်နည်းလမ်း
လက်ဗွေဖတ် touchscreen အတွက် မူပိုင်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့ Apple
physical home ခလုတ်ကို
သိကောင်းစရာ Samsung S7 edge အကြောင်း
Downloader များထဲမှ ကောင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံး Download လုပ်နိုင်သော software
IPv4 IP change နည်း
IPv4 IP change နည်း နှင့် IP
Wifi password အား PC တွင်ပြန်ကြည့်နည်း
Asus Zenfone5 Dual SIM - Charcoal Black - ၂၂၅၅၇၀ ကျပ်
Xiaomi Notebook Air 13.3"
ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Dual Camera တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
*** Phone တွေမှာပါတဲ့ Dual Camera
The Dark Night Rises Android Game
Yangon Mobile Store မှဖုန်း​နှင့်​ဆက်​စပ်​ပစ္စည်း​​​ဈေး နှုန်းများ
YANGON MOBILE STORE Price List (2.2.2017 Update)
လုပ်ငန်းသုံး Laptop ဘယ်လိုဝယ်ကျမလဲ
Zmi 4G Portable Powerbank Router
MOBA LEGENDS mobile game
Android ဖုန်းဖြင့် portable wifi hotspot အသုံးပြု နည်း
Android ဖုန်းဖြင့် portable wifi hotspot
Android Authority Blog ရဲ့ The Best of CES 2017
Gamer များအကြိုက် MSI 7th Gen i7 Gaming Laptop
Gamer များအကြိုက် MSI 7th Gen i7 Gaming Laptop (GL62-7RD)
ASUS Zenfone AR (CES 2017)
FUN - Have lots of Fun
POST - Start your Blogging Journey
Korea Idol တွေရဲ့ စန်းကတော့
" ကြွေတယ်ကွာ " " ခွက်ပါရစေ
3 Share 314 Views
fade world for light members
အဖြူတွေ အရောင်ဖျော့တဲ့ ကမ္ဘာ
analysis ofagamer
3 Share 124 Views
22 things for being happy and warm family
4 Share 148 Views
4 Share 137 Views
land where demons are beautiful
2 Share 117 Views
poem : Than Way Ga
2 Share 134 Views
3 Share 129 Views
Friday 13 or Black Cat Day
5 Share 455 Views
4 Share 428 Views
5 Share 334 Views
ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်း ၈ ခု
1 Share 548 Views
ကြံတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ( အလုပ်ခွင်မှလူတိုင်းအတွက် )
ဟော ... ဘီးလည်သံကြားလိုက်ရပြီ
1 Share 399 Views
အချုပ်အခြယ်တွေကနေရုန်းထွက်နိုင်မယ့် ကိုယ်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်ကို မမေ့သေးဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
1 Share 481 Views
Axolotl (သို့) မက္ကဆီကိုရေပုတ်သင်
1 Share 388 Views
1 Share 336 Views
3D Handmade Card လုပ်နည်း
3D Handmade Card လေးတွေ
Handmade Card လေးတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်
*ရောင်နီဆီရောက်ဖို့ ညအမှောင်ကို ဖြတ်သန်းရတယ်*
လက် (၄) မျိုး အကြောင်း
သာမာန်အရပ်သားလိုပဲတဖန်ပျော်ရွှင်နေပြန်တဲ့ သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမား
ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့ဟာ ဆိုရင်
invaders by Rob Hale
2 Share 162 Views
ရေဓာတ် ခန်းခြောက်ခြင်း ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ရဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ရဲ့
4 Share 359 Views
ရေဓာတ်ခန်းခြောက် ခြင်း လက္ခဏာများ
ရေဓာတ်ခန်းခြောက် ခြင်း လက္ခဏာ
2 Share 324 Views
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီး၏ လိုအပ်သောရေပမာဏ
4 Share 294 Views
အပြင်းစားတုပ်ကွေးH5N1ဟု အတည်ပြု ကြက်ဥကြက်သားအရောင်းဆိုင်အားလုံးပိတ်မည်
4 Share 334 Views
1 Share 378 Views
"ဝါးရေ" ဆိုတာ တရုတ်နဲ့
တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားတွေ ဘာလို့ကြိုက်ကြတာလဲဆိုတာ...
(၁) လက်ဖက်ကို အမြဲနိုင်တာ
1 Share 384 Views
ဆေးသောက်စဉ်မှားတတ်တဲ့အမှားကနေ မလိုအပ်တာတွေမဖြစ်စေဖို့့
1 Share 346 Views
မေမေနဲ့ဆရာမသိစေဖို့ Dyslexia ( ဒစ်လက်စီးယား)
2 Share 346 Views
သံပုရာသီးရေနွေးစိမ်ရည်ကို တစ်နှစ်ကြာသောက်ပြီးနောက် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
Share 442 Views
ဘီယာသောက်သုံးသင့်တဲ့အချက် ၁၀ ချက်
ဆိုးဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်လို့မျက်လုံးပါအရောင်ပြောင်းသွားပြီး ကန်းလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး
Victoria မှ အသက် ၁၆ အရွယ် Tylah Durie ဟာ
မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာများ
ကော်ဖီတစ်နေ့ သုံးခွက်သောက်ခြင်းက အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို ထက်ဝက်လျှော့ချပေးနိုင်
ကလေးနှစ်ယောက်ထက်ပိုမွေးထားသော အိမ်ထောင်ရှင်များ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမိုများပြား
Healthအများသုံးသန့်စင်ခန်းရှိ လေမှုတ်စက်အောက်မှာ လက်ကို အခြောက်မခံသင့်
၁၀ နာရီထက် ပိုအိပ်ရင် အဝလွန်ရောဂါဖြစ်နိုင်
တစ်နေ့ကို ပျဉ်းမျှ (၈)
မုန်လာဥနီ ပုံမှန်စားခြင်းဖြင့် မျက်လုံး အတွက် ကောင်းရုံ သာမက ရင်သားကင်ဆာပါ ကာကွယ်နိုင်
👒Tofu body bath claenser (တိုဖူး
ဆေးဖက်ဝင် ရဲယိုပင် အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Nature's T Infusion ရဲ့​ဆေးစွမ်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ပဋိဇီဝ ဆေးဝါးအန္တရာယ်
အစားထိုးကုသထားတဲ့ နှလုံးအဂါင်္တုကို ကျောပိုးအိတ်မှာ ထည့်ပြီး Gym ကစား နေတဲ့ အာဂလူသား
*** ကော်ဖီ သောက်ရန်
ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး သုံးချပ်တွဲဖန်သားပြင် RAZER PROJECT VALERIE
အညောင်းပြေ Dolphin Infrared massager
🏃အညောင်းပြေ Dolphin Infrared massager
Electric Barbecue Grill နဲ့အကင်လုပ်စားကြမယ်
Elecric Barbecue Grill အကင် စက်
ဆေးကြောရာတွင် အသုံးဝင်သောSoap Magicအကြောင်း
ပူပြင်းရာသီကို mini funလေနဲ့ဖြတ်သန်းကြမယ်
Egg Master(ကြက်ဥအကြော်လိုက်ကြော်စက်အကြောင်း)
Interior Designer တစ်ယောက်လုပ်မယ်ဆို သင်သိသင့်တဲ့ ၁၀ ချက်
hope scent solu
2 Share 181 Views
ကျနော် မသိချင်သော အရာများ
2 Share 141 Views
world without u
3 Share 140 Views
2 Share 132 Views
2 Share 111 Views
မင်း နဲ့ အတူ နေဝင်ချိန် တွေ
2 Share 281 Views
1 Share 373 Views
Forex trading လုပ်ဖို့ ဆွယ်ခံနေရရင် ဖတ်ထားသင့်ပါသည်။
Forex Trading ကိုယ်တိုင် လုပ်နေတဲ့
Aavashare မှ မြန်မာပြည်သူပြည်သား
အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ လက်စတာနည်းပြ ရေနီယာရီအတွက် မော်ရင်ဟိုရဲ့ မှတ်ချက်စကား
ကမ္ဘာနဲ့တူတဲ့ ဂြိုဟ်ခုနစ်လုံး အသစ်တွေ့ရှိကြောင်း နာဆာအဖွဲ့ ကြေညာ
နိုင်ငံတစ်ကာက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တွေရဲ့ TRAILER တွေကိုကြည့်ရှု့ခံစားနိုင်မယ့် FACEBOOK PAGE တွေအ ကြောင်းးးးး
ထိုင်းကလပ်ကိုသွားကစားမယ့် ရတနာပုံတိုက်စစ်မှူး ရှိုင်းသူရ
တစ်ယောက်အထုတ်ခံရသော်လည်း မန်ယူ အဝေးကွင်းမှာ နိုင်ပွဲရရှိ
နှစ်ကျော့ပေါင်း ၄-၀ ဂိုးနဲ့
မန်စီးတီးနဲ့ မိုနာကို အပြန်အလှန် ဂိုးမိုးတွေရွာခဲ့ကြတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကစားမည့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် သုံးသပ်ချက်များ
နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးဧ။် အနာဂတ် မကြာခင် သိရတော့မည်
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်က အိမ်ကွင်းမှာ နာပိုလီ အသင်းကို ၃ ဂိုး ၁ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်ညက
အာဆင်နယ် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမိုးရွာလိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးးနစ်